FUN Archives - Page 77 of 82 -
အပျိုကြီးပေါက်စများ လာမည့်ဗယ်လင်တိုင်းဒေးတွင်ပထမဦးဆုံး ချော့ကလက်ကုန်းဆင်းစားရမည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Posted on February 11, 2017 August 7, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
FUN Knowledge Relationships
ကိုယ်မျှော်လင့်တာတစ်မျိုး ရလိုက်တာက တစ်မျိုး ဖြစ်နေသော ပျိုမေတို့ရဲ့ ကြင်သူသက်ထား ချစ်ရည်းစားများရဲ့ အကြောင်းပါ။ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေဟာ အလိုလောဘ ကြီးတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ တခါတလေမှာ ကိုယ့်ချစ်သူဆီက မတောင်းဆိုပေမယ့် လိုချင်တာလေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအခါ လိုချင်တာ တစ်မျိုး ရတာက တစ်မျိုးနဲ့ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါရော။ ဘာတွေများ လွဲကုန်ပါလိမ့်။ သင်ထင်နေတာ – သင့်ချစ်သူက သူ့ရဲ့ဘဏ်ကဒ်ကို သင့်ကို သုံးစေပြီး နေ့တိုင်း ဈေးဝယ်ထွက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းက – သူတောင်မှ နေ့တိုင်း နွားနို့ ဝယ်မသောက်နိုင်ပါဘူး။ 😛 သင်ထင်နေတာ – သင့်သူငယ်ချင်းတွေ အားကျရလောက်တဲ့အထိ သင့်ချစ်သူဟာ အလန်းစား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ […]
Posted on February 11, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
Fashion & Beauty FUN Knowledge Women News
ပျိုမေတို့အတွက် ခေတ်စားလာတော့မယ့် ချိုင်းမွှေးဖက်ရှင် တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ချိုင်းမွှေးဖက်ရှင်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်သူတွေက ဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲ။ 😛 ရောင်စုံ ချိုင်းမွှေး xxx ရောင်စုံ ချိုင်းမွှေး xxx ဆိုးကြမလား xxx 😛 ပျိုမေတို့ရေ ဆံပင်အရောင်ပြောင်းနေရတာ မျက်လုံးအရောင်ပြောင်းနေရတာ ဒါမှမဟုတ် လက်သည်းခြေသည်းအရောင်ပြောင်းနေရတာ ရိုးအီနေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ချိုင်းမွှေးလေးတွေ အရောင်ပြောင်းကြမယ်လေ။ ချိုင်းမွှေးကို ဆေးဆိုးတဲ့ဖက်ရှင်ကတော့ အခုတလော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဖက်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ ဒီဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်း မျောပါလာမယ်ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ show ပွဲတွေသွားတာများတဲ့ raver ကိုကိုမမများအနေနဲ့ လက်ပြတ်အင်္ကျီဝတ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ချိုင်းမွှေးလေးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ဖော်ထုတ်ပြသလို့ရတာပေါ့နော်။ 😛 မြန်မာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးလက်ပြတ်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီဖက်ရှင်က […]
Posted on February 9, 2017 February 9, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
ရှင်သိချင်ရင်တော့ ဝင်ဖတ်ပေါ့ရှင်။?(လိုင်းကောင်းတာတွေ မကောင်းတာတွေ မလိုချင်ဘူးနော်။အခုဖတ်ဆို ဖတ်ပဲ။?) ဟင်း ဟင်း…ရှင်ရောက်လာပြီ ဆိုတော့ ကျွန်မပြောရတော့မှာပေါ့။ ရှင်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းလေး။? ဘာရစ်ဦးမလို့လဲလို့ တွေးမနေနဲ့နော်။ရှင် အခု အဲ့လို တွေးနေတယ် မဟုတ်လား။?သိနေတယ်။သိနေတယ်။ ဒီစာဖတ်ဖို့ ဝင်လာကတည်းက အဲ့စိတ်နဲ့ ဝင်လာတယ်ဆိုတာ။အခုမှ လူမိလို့ ပြုံးဖြီးဖြီးလုပ်မနေပါနဲ့။ ?ရှင်တို့ယောကျာ်းတွေက အဲဒါပဲ။ ကျွန်မတို့မိန်းမတွေကို အားနေ ရစ်တယ်တယ်လို့ ထင်နေကြတာ။ (မအားလည်း ရစ်တယ်ရှင့်။?) ထားပါရှင်။ အခု လိုရင်းကိစ္စကို ပြောမယ်။ ကျွန်မ သိပါတယ်။ ရှင်အခု ဒီဘလော့ထဲ ဝင်လာကတည်းက ကျွန်မ ပြောမယ့် ကိစ္စကို အဖြူလား အမည်းလား မသိသေးဘူးဆိုတာ။ကျွန်မက ဗိုလ်အောင်ဒင် မဟုတ်ပေမယ့် ရှင်ကိုတော့ ဒီကိစ္စကိုမြင်စေချင်တယ်။ ကျွန်မ ပြောတဲ့အခါ ရှင်က” အန်ကယ်ကတော့ နိုးပါ”လို့တော့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ […]
Posted on February 7, 2017 February 10, 2017 Author Comment(0)
မိမိတို့ ရှူရှိုက်နေတဲ့ လေတွေဟာ အခြားသူများ လေလည်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေလည်တာဟာ ကျန်းမာရေးအရ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မလိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကို အပြင်ကို ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ လေမလည်ဖူးတဲ့သူရယ်လို့ ရှိမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လေတွေဟာ စက်ရုံကနေ အသစ်အသစ်တွေ ထုတ်ပေးနေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အခြားသူများ လေလည်ထားတာတွေက ပြန်လည်ရောနှောပြီး အနံ့ပြယ်နေတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ လေမလည်ဖူးတဲ့ သူမရှိတဲ့အပြင် အီးမရှူဖူးတဲ့သူပါ မရှိဘူးဖြစ်သွားရော။ 😛 အစာစားရင်း အသက်ရှူရင်း ဝင်သွားတဲ့လေတွေ ရှိပါတယ်။ သကြားဓာတ်နဲ့ ကစီဓာတ်တွေ ပြိုကွဲတဲ့အခါမှာ ရံဖန်ရံခါ အစာမချက်နိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ဓာတ်ငွေ့အနေနဲ့ အပြင်ကို ထုတ်ပေးတာကို လေလည်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လေလည်သွားတဲ့ လေထဲမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆာလဖိုက် ဓာတ်ငွေ့ပါပါတယ်။ […]
Posted on February 5, 2017 February 6, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
Posted on February 1, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
Beauty DIY Fashion & Beauty FUN
ကိုယ့်ဆီမှာပဲ ရှိမယ့် ခါးပတ်လေးများ
မိမိတို့တစ်ယောက်တည်းမှာပဲ ရှိမယ့်ခါးပတ်မျိုးလေးဆိုရင်ကော မလိုချင်ဘူးလား။ ခါးပတ်ဟာ ဖက်ရှင်ကို ပိုမိုဆန်းသစ်စေလို့ မိမိကိုယ်ပိုင်ခါးပတ် တစ်ခု ရှိကို ရှိသင့်ပါတယ်။ ခါးပတ်မပတ်ဖူးတဲ့သူရယ်လို့ ရှားပါလိမ့်မယ်။ မပတ်ဖူးရင်လည်း ခုချိန်က စပြီး ပတ်လိုက်ရအောင်နော်။ ဘယ်လောက်ဖက်ရှင်ကျလဲဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် handmade ခါးပတ်လေးလည်း တခါတည်း လုပ်လိုက်ရအောင်။ ကြိုးလေးတွေကို ထုံးပြီး ခါးပတ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ လယ်သာဖြစ်ဖြစ် ဖဲကြိုးဖြစ်ဖြစ် ခါးပတ်အသွင် ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဇာကြိုးလေးတွေဟာ ခါးပတ် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်တွေ ပုလဲလုံးတွေနဲ့ အလှဆင်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ တွဲလောင်းလေးတွေ ချထားတာလည်း ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို ရရှိစေမှာပါ။ ပျိုမေတို့အားလုံးလည်း ကိုယ်ပိုင်ခါးပတ်လေးတွေနဲ့ အလှတိုးနိုင်ကြပါစေ။ Verte (For Her Myanmar)
Posted on January 30, 2017 January 31, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
မနေ့တုန်းက ပိုးဟပ်အတွေ့အကြုံ ပျော်စရာဂိမ်းလေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်တွေထဲက ၁၀ခုကို ရွေးခြယ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကအိမ်သာတက်နေတုန်း သူကအိမ်သာခွက်ထဲမှာ ယက်ကန်ယပ်ကန်နဲ့ ကျသွားမှာလည်းစိုးတယ် တက်လာမှာလည်းကြောက်တယ် ထသွားရအောင်လည်းမပီးသေး ဆက်ထိုင်ဖို့ကလည်း မယိုးမယွနဲ့… Aqua Wutyi မျက်နှာကိုလာနားလို့လန့် ပြီး ကိုယ့်ပါးကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းမသိအောင် ရိုက်မိတာလေ။ Khine Hsu Thel ပိုးဟပ်ပျံတစ်ကောင်ကြောင့်ဖိနပ်တောင်မပါဘဲအိမ်အပြင်လမ်းမကြီးထိထွက်ပြေးဖူးတရ် :3 May Thazin Hlaing ပိုကီမွန်ဖမ်းတုန်းကပေါ့ ထွက်လာသမျှအကောင်အကုန်ဖမ်းတာ ပိုးဟပ်ကျောလာကပ်တော့မနေနိုင်ဘူး ထပြေးတာ။ Vipergirl Vipergirl စားပွဲပေါ်ကပိုးဟပ်ကိုကြောက်လို့ စာအုပ်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တာ မာမီ့မျက်မှန်ကျိုးသွားလို့ အရိုက်ခံရဖူးတယ်။ Htike Htike Aung ကိုယ့်အပေါ်တက်လာပီ EE ပါဖူးတယ်။ ပိုးဟပ် E အနံလေးတွေနဲ့ ရေမွှေးဆွတ်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ Yee Mon […]
Posted on January 29, 2017 January 29, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
အဟင်း…အဟင်း…သယ်ရင်းအချင်းချင်း ဒါမျိုးလေးတွေ လှိမ့်ဖူးတယ်ဟုတ်.. မငြင်းနဲ့နော်။??? သယ်ရင်းတွေကြား မလိမ်ဖူး မညာဖူးတဲ့သူ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ အပြန်အလှန် ဆေးထိုးတယ်။မလှိမ့်တပတ်လုပ်မယ်…။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နစ်နာစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တော့ မရှိကြပါဘူး။ နောက် အလိမ်ပေါ်တဲ့အခါကျရင်လည်း…အလိမ်ခံရတဲ့သူဘက်ကလည်း ထူးထူးခြားခြား စိတ်မဆိုးသလို လိမ်မိတဲ့သူကလည်း စပ်ဖြီးဖြီးပါပဲ။ ?အခုအောက်က မုသားစကား (၅)မျိုးကတော့ တော်တော်များများ သုံးဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ (၁) “ငါအခုလာနေပြီ။လမ်းမှာ..။” “ငါတို့ အားလုံးစုံနေပြီ။နင် အခု ဘယ်မှာလဲ။” “ဟယ် ဟလား…ငါအခုလာနေပြီ လမ်းမှာ ကားတွေကြပ်နေလို့ ခဏစောင့်” အဲ့လိုပြောပြီး နောက်(၁)နာရီလောက်မှပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ သေချာတယ်။ခုနကလမ်းမှာဆိုတာ… အိပ်ယာပေါ်မှာပဲလား ၊ မှန်တင်ခုံရှေ့မှာပဲလား တစ်ခုခုပါပဲ။ (တကယ်ကားကြပ်တာလည်း ဖြစ်ကောင်းတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။?) (၂)”အိမ်က မလွှတ်ဘူး။” ဒါကတော့ အိမ်တွင်းပုန်းမမတွေ ပြောတတ်တဲ့စကားပါ။သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီးချိန်းရင် ငါ့အိမ်က လွှတ်မှာ […]
Posted on January 28, 2017 October 26, 2018 Author Adrien	Comment(0)